साताको तस्वीर : नमुना शहर बन्दै बुर्तिवाङ ! – ebaglung.com
साताको तस्वीर : नमुना शहर बन्दै बुर्तिवाङ !
२०७३ माघ १८, मंगलवार १०:०७	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र, विविध
बुर्तिवाङ बजार, बागलुङ जिल्लाको दोश्रो व्यापारिक केन्द्र हो । पछिल्लो केहि वर्षमै यसको तीब्र गतिले विकास भएको छ । गगनचुम्बी भवनहरुले बजार भरिएका छन् । जिल्लास्तरीय सुविधाको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सन्चालनमा आएको छ । प्रशासनिक सेवा केन्द्र, मालपोत, नापी कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय आदि सरकारी सन्यन्त्रहरु स्थापित भैसकेका छन् । नेपाल बैँक लगायत विभिन्न बैंकिङ निकायहरुले सेवा प्रबाह गरिरहेका छन् । सुविधा सम्पन्न सामुदायिक र निजी विद्यालयहरु सन्चालनमा रहेका छन् । यतिमात्रै होईन, बुर्तिवाङ बजारमा तीनवटा एफएम रेडियो सन्चालनमा रहेका छन् । सुविधासम्पन्न होटलहरु देखी आम नागरिकका आवश्यकताका सरसामानहरुका ठुला पसलहरु खुलेका छन् । झट्ट हेर्दा बुर्तिवाङ सबै कुराले परिपूर्ण देखिन्छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणले बुर्तिवाङ बजार, मुलुककै एकमात्र शिकार आरक्ष तथा जिल्लाको अतिरमणीय पर्यटकीय गन्तव्य रहेको ढोरपाटन तथा बागलुङ जिल्लाको पश्चिम सीमासंग जोडिएका रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, पश्चिम म्याग्दीवासीलाई आवत जावत गर्ने केन्द्र (जङ्कसन) बनेको छ । बुर्तिवाङ भोलिका लागि धेरै संभाव्यता रहेको स्थान हो भन्न कन्जुसाँइृ गर्ने ठाउ छैन ।
सरकारले लोकमार्गमा रहेका मुलुकका दश बजार (ठाउँ)लाई नमुना शहर बनाउने योजनामा बुर्तिवाङ पनि रहेको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने कार्य भैरहेका छन् । नमूना शहरका लागी जग्गा खरीद भैसकेको छ । तर नमुना शहरका लागि जुन तीब्र गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको तीतो यथार्थता स्थानीयले बताएका छन् ।
बुर्तिवाङ बजारमा भवनहरु गुरु योजना बिनानै होडवाजीमै निर्माण गरिएकाले नमुना शहरका भवनहरु भन्न सकिने अवस्था भने छैन । साँघुरा सडक, गल्ली र ढलको अव्यवस्था, फोहोर संकलन केन्द्र नहुँदा बजार दिनपरदिन दुर्गन्धित बनिरहेको छ ।
बडीगाड खोलाको किनारमा रहेको बुर्तिवाङ बजारलाई गत साउन १० गते राति र ११ गते विहान बडीगाड खोलामा आएको भीषण बाढीले नराम्ररी क्षेत विक्षेत बनाएको छ । त्यसको मरमत कार्य हुन सकेको छैन । नदी किनारमा तटवन्ध निर्माण गरी बजारको संरक्षणमा जुट्नु बुर्तिवाङवासीकोमात्र नभएर सरकारी/गैह्र सरकारी सरोकारवाला निकायहरुको पनि जिम्मेवारी हुन आउँछ । बुर्तिवाङ बजारको संरक्षण सबैको पहिलो प्राथमिकता हुन जरुरी छ ।
श्रोतका अनुसार दश नँया शहर आयोजना अन्र्तगतको बुर्तिबाङ बजारमा सञ्चालित बिकास निर्माण कार्य यस बर्षको योजना अन्तर्गत केहि कार्यक्रम सुरु भएपनी महत्वपुर्ण कार्यक्रम भने स्थानीयकै बिरोधका कारण अबरुद्ध बनेको छ । यस बर्ष कुल ८ करोड २४ लाख बजेट बिनियोजन भएसँगै टाउन प्लानिङ, बुर्तिबाङ बजारको बिच सडक जस्ता महत्वूर्ण योजना बिरोधकै कारण अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
बुर्तिबाङ बजारको सिमसार क्षेत्र र सिनेमा हल क्षेत्रमा ढल ब्यबस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ तर दुई बर्ष पहिले सडक डिभिजनले बनाएको ढल बिचमा परेको र सो ढल ब्यबस्थित तवरले निर्माण नभएको, ढलको पानी नबग्ने गुणस्तरीय नभएका कारण सो क्षेत्रको ढल ब्यबस्थापन हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै शहरी बिकास आयोजनार्कै सक्रियतामा बुर्तिबाङ लक्ष्मि कुण्ड घाट हुँदै कुत्थाप्लामा रहेको सहरी बिकास आयोजनाका निमार्णाधीन अबस्थामा रहेको भवन सम्म सडक खुलाउनका लागि २५ लाख बजेट बिनियोजन भएसँगै सडक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्यस्तै बुर्तिबाङ बजार साईड प्रहरी कार्यालय अगाडि देखि कवर्ड हल हुँदै चुरेला बास जोड्ने एक करोड मुल्यको महत्वपुर्ण सडक स्थानीय केहि उपभोतmाको विरोध सँगै निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । उता बुर्तिबाङ २ तारीखेतमा नँया शहर अन्र्तगत ब्यबस्थित बस्ति बिकासका लागि ६५ लाख बजेट बिनियोजन भएपनी स्थानीय केहि उपभोक्ताको असहमतिमा प्लटिङ कार्य रोकिएको आयोजनाले बताएको छ ।
२०७३ माघ १८ ।
देबिस्थान माविमा बिब्यस र शिक्षक अभिभाबक सँघको गठन !
यो पनि झुट हो भनिदेऊ, आयोजक प्रभु !